Shacabka Marroco oo u codeeyay Dastuurka cusub ee uu soo bandhigay Boqorka dalkaasi. – SBC
Shacabka Marroco oo u codeeyay Dastuurka cusub ee uu soo bandhigay Boqorka dalkaasi.
Maalinimadii shalay oo ay ka dhacday Marroco cod bixinta Aftida Dastuurka cusub ee uu soo bandhiga Boqorka Marroco ayaa waxaa Natiijooyinka horu dhaca ah ee kasoo baxaya ay muujinayaan in %98.48 ay u codeeyeen ayidaada Dastuurka Cusub.
Golaha Dasruuriga ee Dowlada Marroco ayaa sheegay in Natiijooyinka kama dambaysta ah ay soo bandhigi doonaan Maalinta Axada ama Isniinta ee Isla Asbuucan gudihiisa.
Wasiirka arimaha gudaha Marroco Dayib Sharqaawi oo isagu soo bandhigay Natiijooyinka horu dhaca ah ee Cod bixinta Aftida dastuurka cusub ayaa sheegay in cod bixinta ay ku dhacday Jawi dagin,iyadoona dadkii loogu asteeyay cod bixinta ay ka wada qayb galeen.
Sharqaawi waxaa uu sheegay in %30 dadkii codkooda dhiibtay ay ahaayeen Dhalinyaro da’aadoodu ay ka yartahay 35 sano,waxaana sida uu sheegay ay taasi muujinaysaa sida ay dhalinyarad Dalka Marroco ula dhacsan yihiin Dastuurka Cusub.
Dhaqdhaqaaqa 20-ka February ma aanay taageerin dastuurka cusub,waxaana taa badalkeeda ay ku taliyeen in Baqor Muxamadka Lixaad ku wareejiyo talada Baarlamaanka,iyagonu ay dajiyaan sharciga dalka.
Dad badan oo u dhashay Dalka Marroco ayaa aamin san in Boqorka Muxamadka Lixaad uu weli doonayo in uu awood kusii yeesho talada dalka,iyadoona musuqmaasuq iyo weliba Fasaad uu ka dhex wado Nidaamka dowliga ah,ayna tahay sida ay doonayaan in lala xisaabtamo.